२६ पुष २०७२, आईतवार १०:५४	0 3,154
२४ पुष २०७२, शुक्रबार १८:०४	0 19,810
२४ पुष २०७२, शुक्रबार १३:५५	0 4,447
कसरी भन्ने ‘आइ लभ यु’ ? यसो गर्नुस्
२३ पुष २०७२, बिहीबार १५:५७	0 791
प्रेम अभिव्यक्त गर्ने एउटा उत्तम तरिका हो 'आइ लभ यु' भन्ने । प्रेम अभिब्यक्त गर्नका लागि ‘आइ लभ यू’अर्थात 'म तिमीलाई प्रेम गर्छु' भनेर भनिदै आएता पनि यो तरिका मात्र सबैथोक भने होइन । यो वाक्य यतिधेरै गहन छ कि जुन धेरैका लागि महाभारी हुने गर्छ । आफुले भित्रै देखि मन पराउदा पनि आफ्नो प्रियसीले के भन्ने हुन् भनेर 'आइ लभ यु' भन्न सकिरहेका हुदैनन् । यदि तपाईलाई यस्तै
प्रधानमन्त्रीले क-कसलाई बाँडे २ महिनामा २ करोड चन्दा ? (नामावलीसहित)
२३ पुष २०७२, बिहीबार ०८:५४	0 500
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ महिना भित्रमा करिब २ करोड रुपैया राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रित्याएका छन् । ओलीले बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई ढुकुटीबाट जथाभाबी रकम बाडेको खुलासा भएको हो । यी हुन् प्रधानमन्त्रीबाट रकम पाउने भाग्यमानीहरु...
२२ पुष २०७२, बुधबार १५:५१	0 11,862
२२ पुष २०७२, बुधबार १३:४९	0 2,906
२१ पुष २०७२, मंगलवार ०८:५२	0 520
यसरी पार्दैछ सरकारले तपाइँको घर झिलिमिली
२० पुष २०७२, सोमबार ०८:२५	0 394
हावाबाट बिजुली निकालेर भएपनि आघौं सम्म नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नयाँ तरिकाले तपाइँ हाम्रो घरमा झिलिमिली ल्याउने भएको छ। त्यसको सूचना आजका प्रमुख दैनिक पत्रिकामा विद्युत प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको छ।
२० पुष २०७२, सोमबार ०८:१८	0 1,036
१९ पुष २०७२, आईतवार ०९:१८	0 28,023
१९ पुष २०७२, आईतवार ०९:११	0 656
१९ पुष २०७२, आईतवार ०७:२०	0 31,143
१८ पुष २०७२, शनिबार १४:५७	0 1,663
१८ पुष २०७२, शनिबार १३:५९	0 1,097
किन्नुपर्ने 10 SLR क्यामेरा
१८ पुष २०७२, शनिबार ०५:४०	0 2,230
फोटोको शौखिनका लागि यतिखेर एसएलआर क्यामेरा आवश्यकता पनि हो। जसरी डिजिटल प्रविधिका कारण फोटोग्राफी सस्तो र सुलभ भएको छ। त्यसरी नै अलिकता शीप र सक्रियता देखाउने हो भने यो पेशा र आमदानीको राम्रो क्षेत्र पनि बन्न सक्छ। जसका लागी तपाइँले यस्ता क्यामेरा किन्न सक्नुहुन्छ जो मूल्यमा सस्ता र काममा दामी छन्। यी यस्ता क्यामेरा हुन जसले तपाइँलाई एमेच्योर देखी प्रोफेसनल बनाउँछन्।
१० फोटोमा हेर्नुस् नयाँ वर्षको स्वागत
१७ पुष २०७२, शुक्रबार १९:१२	0 554
धेरै क्रिश्चियन देशहरु जो विकसित छ उनीहरु जीजस क्राइस्टको जन्मसँग जोडिएको क्यालेण्डर मान्दछन्। विश्वका धनी र शक्तिशाली मुलुकहरुले मान्ने भएकाले अंग्रेजी क्यालेण्डर विश्वकै मानक र साझे क्यालेण्डर भएको छ। त्यसैले र्इस्वी सम्वत् विश्वभर नै प्रचलनमा छ।व्यवसाय, बिदा अनि रमाइलोको संयोजनका साथ विश्वका १० प्रमुख शहरमा यसरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरियो। हेर्नुस् १० तस्वीरमा विश्वले देखाएको नयाँ वर्षको उल्लास।
१७ पुष २०७२, शुक्रबार १२:४६	0 760
१७ पुष २०७२, शुक्रबार १०:४९	0 5,497
अर्को ग्रहबाट आएका मानिसहरुले छोडेको आशंका गरिएको मोबाइल भेटिएपछि यतिखेर विश्वभर हंगामा फैलिएको छ। मोबाइल फोनलाई आधुनिक आविस्कारको साधन मान्दै आइएकोमा पुरातत्वविदहरुले ८०० वर्षपुरानो मोबाइल भेटाएपछि पृथ्वी बाहेक अर्को ग्रहका मानिस र उनीहरुको विकासबारे फेरी अर्को बहस छेडिएको छ। अष्ट्रियामा भेटिएको ८०० वर्ष पुरानो भनिएको मोबाइल नोकियाको पुरानो डिजाइनको जस्तै आकार प्रकारको छ। यसको किप्याडमा अंक र अंग्रेजीको अल्फाबेटको सट्टामा विभिन्न फरक फरक शैलीका चित्रहरु रहेका छन्।
१६ पुष २०७२, बिहीबार ०९:५४	0 406
१५ पुष २०७२, बुधबार १९:४६	0 2,019
कम्युनिष्टहरु प्राकृतिक रुपमा नै प्रपोगाण्डा र कपोलकल्पित सूचना प्रवाहमा विश्वास राख्छन्। त्यसैले उत्तर कोरियाबाट आधिकारिक भनेर आएका सूचनाहरु पनि कति सत्य हुन भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन।
१५ पुष २०७२, बुधबार १९:०८	0 527
१५ पुष २०७२, बुधबार १३:४७	0 512
१५ पुष २०७२, बुधबार ०५:५५	0 600
काठामाडौंको राजनीति, व्यवस्था र अर्थतन्त्र कुहिरोको काग बनेको अवस्थामा नेपालीले रगत पसिना बगाएको देश दुबई भने कुहिरोले ढाकिँदा सम्पन्नताको ज्योतीले धपक्क बलेको छ।
१४ पुष २०७२, मंगलवार ११:०६	0 525